यो कस्तो अचम्म ! प्रेमीलाई पढाउन यसरी ठग बनिन् प्रेमिका : नक्कली कम्पनी खडा गरी यस्तो धन्दा !
ARCHIVE, NEWSPAPER » यो कस्तो अचम्म ! प्रेमीलाई पढाउन यसरी ठग बनिन् प्रेमिका : नक्कली कम्पनी खडा गरी यस्तो धन्दा !
३० भन्दा धेरै युवालाई ठगी गरेको आरोपमा २३ वर्षीया युवती पक्राउ परेकी छिन् । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले पाटन सुन्धारा बस्ने सुरक्षा बज्राचार्यलाई पक्राउ गरेको हो । बज्राचार्यले प्रेमीलाई पढाइ खर्च जुटाउन आफूले ठगी गर्नुपरेको बताएकी छिन् । आफ्नो प्रेमी भारतमा रहेको र उसले खर्च मागिरहने भएकाले आफूले पैसा कमाउन साथीहरूलाई ठगी गरेको उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
डिएसपी कार्कीका अनुसार बज्राचार्यले थापाथलीस्थित हस्तकला केन्द्रमा हस्तकलासम्बन्धी तालिम लिएकी थिइन् । तालिम लिने क्रममा चिनजान भएका व्यक्तिहरूलाई नै उनले जागिर लगाइदिने भन्दै ठगी गरेकी हुन् । तालिम लिएका व्यक्तिहरू जागिरको खोजीमा हुने थाहा पाएर उनले हस्तकलासम्बन्धी कम्पनीले कामदार मागेको भन्दै नाटक गरेर पैसा उठाएकी थिइन् । फर्म भरेर पैसा लिएको लामो समयसम्म पनि जागिरबारे सोध्दा अनेक बहाना बनाउने गरेकी थिइन् ।
सडकमा पिसाब फेरेको आरोपमा ललितपुरमा एक युवकको हत्या प्रयास भएको छ । बालकुमारीका स्थानीयले विवेक थापामाथि आक्रमण गरी हत्या प्रयास गरेका हुन् । आक्रमण गर्ने राजेश महर्जनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कारबाही अघि बढाएको छ । साथीहरूसँग मदिरा पिई घर फर्कने क्रममा बालकुमारीमा सडकमा पिसाब फेरिरहेको स्थानीयले देखेपछि थापामाथि कुटपिट भएको हो । टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका उनको ग्वार्काेस्थित ग्लोबल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।